Hubka cusub ee danbiilayahaasha: Qufac iyo hindiso booliska lala beegsado. - NorSom News
Hubka cusub ee danbiilayahaasha: Qufac iyo hindiso booliska lala beegsado.
Tan iyo markii uu bilowday bandowga ama xanibaada ay dowladaha Woqooyiga Yurub kusoo rogeen dalalkooda, xaalada xanuunka Corona-virus awgiis, waxaa soo badanayo dadka loo xukumayo qufac ama hindiso ay dad kale la beegsadeen.
Dalkan Norway booliska ayaa lacago ganaax ah ku xukumay toboneeyo qof oo loo heysto danbiyo la xiriira qufac ama hindiso ay si ula kac ula beegsadeen dad kale, iyaga oo ku cabsi galinayo ama ugu hanjabayo inay qabaan xanuunka corona-virus. Sidoo kale dalka Sweden ayaa boolisku ay ganaaxyo kala duwan siiyeen dad loo qabtay ulaa 150 dhacdo oo arintan oo kale la xiriirta.
Booliska iyo shaqaalaha goobaha caafimaadka ayaa inta badan ah dhibanayaasha ugu badan ee la kulmo dhacdooyinkan la xiriira qufaca iyo hindisada ay la socoto hanjabaada qaadsiinta xanuunka corona-virus.
Dalka Denmark, nin ayaa ay boolisku ka codsadeen inuu istaajiyo baabuur uu xawaare sare ku waday. Waxeyna ka codsadeen inuu soo dago, balse markii uu soo dagay ayuu ku dul qufacay booliskii, kadibna waxa uu ku noqday baabuurka, isaga oo baxsaday. Booliska ayaa ninkaas ka baafiyay warbaahinta, waxeyna dadweynaha ka codsadeen inay booliska soo wargaliyaan, hadii ay arkaan.
Previous articleAbdul Ahmed: Arrimahan ka ogow furitaanka iskuulada caruurta iyo xanoonooyinka.
Next articleIskuulada Oslo iyo xanaanada oo ay dhici karto inaan la furin 20-ka April.